Fahazoana mpampiasa roa dingana ho an'ny Ubuntu amin'ny fampiasana Google Authenticator | Avy amin'ny Linux
vao haingana Google nanomboka ny fanamarinana dingana roa Ho an'ny rafitry ny mailakao dia rindrambaiko famoronana kaody 6 isa amin'ny ankapobeny amin'ny findainao izy io izay ahafahanao manana valiny roa hahazoana ny mailaka amin'ny fomba azo antoka kokoa, amin'ny alàlan'ny fananana kaody nomerika tsy miova izay miova isaky ny iray minitra sy izay tsy maintsy ampidirina aorian'ny fampidirana ny tenimiafinao mahazatra. Mety koa io fanamarinana roa sosona io ampiharina ao amin'ny Ubuntu hanamarinana ny fidiran'ny mpampiasa amin'ny dingana roa, fitaovana iray izay hitazonana ny fahalianana tsy ho ao anaty solosainao na dia fantany aza ny teny miafinao voalohany.
Ity dia fandraisana anjara avy amin'i Jairo J. Rodriguez, ka lasa iray amin'ireo nandresy tamin'ny fifaninanana isan-kerinandro: «Mizarà izay fantatrao momba ny Linux«. Miarahaba anao Jairo!
Ity misy fampianarana kely iray hanatanterahana an'io fampiharana io:
Dingana 1: apetraho amin'ny findainao ny Google Authenticator
Ampidino amin'ny findainao ny Google Authenticator. Ho an'ireo mpampiasa Android dia avelako eto ity rohy manaraka ity:
Sintomy ny Google Authenticator
Ny fampiharana dia azo alaina amin'ny Iphone sy Blackberry.
Dingana 2: Sintomy ny fonosana ho an'ny UBUNTU
Ampio ity PPA manaraka ity amin'ny lisitry ny loharano fonosana amin'ny alàlan'ny fandefasana ny baiko etsy ambany avy amin'ny console:
sudo add-apt-repository ppa: failhell / stable
Dingana 3: havaozy ny lisitry ny APP
Ampandehano ity baiko manaraka ity hanavao ny tahiry momba ny loharano PPA amin'ny rafitrao:
Dingana 4: apetraho ny module ho an'ny PAM (Module Authentication Azo antoka)
Ataovy ny baiko miraikitra, hametraka rakitra roa ao amin'ny rafitrao ity hananganana fanamarinana dingana roa: /lib/security/pam_google_authenticator.so sy / usr / bin / google-authenticator.
sudo apt-mahazo mametraka libpam-google-authenticator
Dingana 5: amboary ny kaonty fidirana
Ilaina izao ny fanatanterahana ny baiko «google-authenticator» avy amin'ny console hampiorina ny kaonty izay nidiranao. Vantany vao novonoina ny baiko dia hiseho eo amin'ny efijery ny kaody QR. Tsy maintsy ampiasainao ilay rindranasa (Google Authenticator) vao napetraka amin'ny findainao hahafahanao mahazo ireo kaody fanamarinana mifandraika amin'ny fidiranao.
Manoro hevitra anao aho ny hanao «écran pirinty» na pikantsary ny kaody QR mba hahafahanareo mampifandray ireo fitaovana hafa avy eo.
Dingana 6: amboary ny PAM hampiasana fanamarinana roa-singa.
Sokafy ny terminal ary ampio ity tsipika manaraka ity amin'ny fisie /etc/pam.d/sudo ary ampiasao sudo vi na sudo gvim hanovana ilay fanovana:
auth takiana pam_google_authenticator.so
Fanamarihana: tsara ny hamelana ny fivoriana misy anao hisokatra satria raha nanao fahadisoana tamin'ny fikirakirana ianao dia afaka mamadika ny fanovana rehetra.
Manokatra terminal vaovao ary mihazakazaha:
Ny rafitra dia hangataka ny tenimiafinao ary avy eo ny fangatahana "Kaody fanamarinana:". Ampidiro ao amin'ny fampiharana Google Authenticator amin'ny findainao ireo isa voamarika.
Hanana telo minitra eo ho eo ianao amin'ny fanovana ny kaody isa. Na inona na inona fiovana isa kaody dia hijanona mandritra ny roa minitra fanampiny izy io.
Raha mandeha tsara ny zava-drehetra, amboary indray ny rakitra /etc/pam.d/sudo, esory ny tsipika nampianao hoe "auth takiana pam_google_authenticator.so", vonjeo ary mivoaha.
Ankehitriny mba hahazoana ny fiarovana tsara indrindra nampiharina ny fanamafisana dingana roa ampidiro amin'ny sudo vi, sudo gvim na mpamoaka lahatsoratra tianao indrindra fa miaraka amin'ny sudo foana ilay andalana «auth takiana pam_google_authenticator.so» mankany amin'ny fisie «/etc/pam.d/ auth »Ary manomboka izao dia mila fanamarinana roa sosona ny fanamarinana rehetra.
Raha te-ho voafetra ianao dia afaka mampiasa rakitra hafa ao amin'ny lahatahiry /etc/pam.d, miankina amin'ny filanao fiarovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Fahazoana mpampiasa roa dingana ho an'ny Ubuntu amin'ny fampiasana Google Authenticator
Tsy mandeha amiko ny PPA ao amin'ny Mint XFCE.
Ataoko angamba fa hiandry andro vitsivitsy isika mba hahavitana azy ho an'ity distro ity.
Eny, aminao, azoko tsara fa jiro kely io.
Raha resaka "fanakorontanana", dia izay ... olona tsy manam-pahalalana ara-teknika kely ary mahalala izay tadiavina rakitra no afaka mandingana ilay toa rafitra fiarovana sarotra kokoa. Io, raha mbola afaka miditra ara-batana amin'ny solosainao io olona io. Noho izany, ity rafitra ity dia tena ilaina amin'ny tranga anaovana fidirana lavitra, toy ny rehefa mampiasa sshd.
Ao amin'ny lahatahiry pam.d misy ireto:
(Mampiasa Ubuntu 12.04 aho ary manana KDE napetraka, na dia Gnome 3.4 aza ny birao.
Saingy rehefa manampy ny fahazoan-dàlana dia tsy mamela ahy hiditra izany dia milaza amiko hoe: "lesoka kritika", voatery nilaozako izy ireo satria avy tao amin'ny terminal tamin'ny "Mode Recovery" izy ireo.
Ny ambiny momba ny sshd dia tsy dia mazava amiko, fa ny tolo-kevitra iray mba hanao izay hahatonga ny rafitra ho azo antoka kokoa sy tsy ho "tsy azo vonoina" dia tena ilaina amiko. Mampiasa Linux aho mandritra ny 3 taona eo ho eo amin'ny antony maro amin'ny maha-matanjaka sy azo antoka azy ary mitady fomba foana aho mba hahasarotra kokoa ny zava-drehetra, ampio ireo sosona sy fiarovana, araka ny nolazaiko hoe "TIP" amin'ny fomba fampiasana tsara ny fanamarinana 2-dingana Ubuntu dia ho tsara. =)
Miankina amin'ny rafitra ampiasainao, dia iray amin'ireo safidy ireo:
Ary avelao aho hanazava fa misy dikany kokoa ny fampiasana azy amin'ny sshd, ohatra, toy izay amin'ny fidirana amin'ny solosaina. Noho ny antony tsotra fa voahazona ao anaty fampirimana ao an-tranonao ny lakilen'ny miafina mba hahafahan'ny olona manana fidirana amin'ny solosainao manomboka amin'ny livecd iray, alaivo ny lakileny ary hiteraka mari-pamantarana tokana. Eny, marina fa "manao izay hahasarotra kokoa ny raharaha" izy io nefa tsy rafitra tsy azo vonoina ... na dia milay be aza.
Ny olana mitovy amin'izany dia tsy hisy amin'ny fizotrany mitaky fidirana lavitra, toy ny sshd.
Ok, izay ihany, raha tsy te hampandeha ny fanamarinana amin'ny dingana 2 fotsiny aho raha hiditra amin'ny rakitra aiza no ampiako hoe "auth takiana pam_google_authenticator.so" ao amin'ny pam.d?
Misaotra loharano tena tsara!
KEOS dia hoy izy:
raha mandeha izy dia manana 12.04 aho ary nanampy PPA repos
Valio amin'i KEOS
PPA tsy miasa amin'ny Ubuntu 12.04 Misy vahaolana?